Antsafa nifanaovana tamin’i Isela Xospa, mpikatroka an-tserasera ho an’ny fiteny Náhuatl · Global Voices teny Malagasy
Antsafa nifanaovana tamin'i Isela Xospa, mpikatroka an-tserasera ho an'ny fiteny Náhuatl
Mpampiantrano ny kaonty twitter @ActLenguas ny 27 Aprily - 3 May 2020
Voadika ny 12 Mey 2020 7:42 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Esperanto , Italiano, Ελληνικά, Español
Saripika natolotr'i Isela Xospa
Ny taona 2020, hotohizantsika ny fanentanana ety anaty media sôsialy hanasàntsika olona maro hitantana ny kaonty Twitter, @ActLenguas (Fikatrohana ho an'ny fiteny) ka hizaran'izy ireny ny niainan-dry zareo tamin'ny tamin'ny famelomana indray sy fisoloana vava ireo fiteny zanatany. Resahan'ity lahatsoratra fampahafantarana ity ny momba an'i Isela Xospa (@EXospatronik) sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy..
Isela Xospa no anarako ary avy any amin'ny fari-piadidian'i Milpa Alta, ao amin'ny faritra Nahua any atsimo-atsinanan'i Mexico City. Mpamorona endrika, mpanaingo ary mpanonta miasa ho an'ny tena.
Amin'izao fotoana izao aho dia mitantana ny Ediciones XospaTronik (2014), tetikasa iray fanontàna tsy miankina izay miresaka ireo tarakevitra sy endriky ny fiaviana indizeny (teratany), ny fampiroboroboana ny fianarana ary ny fanomezana aina vao ny endrika iray hafan'ny fiteny Nahuatl any amin'ny ivo ambonin'ny Nahuatl (klasika).
Efa an-taona marobe aho no nirotsaka ho amin'ireo ady, tetikasa sy tanjona isankarazany izay mifantoka amin'ny fitahirizana ny tontolo iainana sy ny fanomezana aina vao ireo fiteny indizeny, ary ny fiarovana ny fahalalàna sy kolontsaina nentindrazana ananan'iireo vahoaka teratany. Io no fomba nahaterahan'ny tetikasa “Fifanakalozana fahalalàna sy ny fikatrohana nomerika tamin'ny fiteny teratany”. Katsahany ny hanome hery ireo fiaraha-mientana sy fifanakalozana eo amin'ireo vahoaka teratany eto amin'ny tanibe misy anay, mba hamokarana boky sy fitaovana mampiasa ny sary, fa amin'ny fiteny teratany, ho an'ny ankizy sy ny tanora.
Nifantohan'ny tetikasa ny fanontàna izay afaka vakiana ety anaty aterineto no sady afaka trohana. Mpikatroka an-tsitrapo no nandika izy ireny ho amin'ny fiteny teratany isankarazany, ary nanampy nizara ireny fanontàna ireny tany anatin'ny vondrompiarahamonina misy an-dry zareo.
En la Ciudad de México y específicamente en la Alcaldía de Milpa Alta la lengua sufrió una pérdida casi total en tan solo tres generaciones, es decir, en un periodo aproximado de cincuenta años pasamos del 100% de hablantes de lengua indígena al 3.068% (Censo de población INEGI 2010)
Ao Mexico City, ary indrindra fa ao amin'ny fari-piadidian'i Milpa Alta, saiky efa nanjavona tao anatin'ireo andian-taranaka telo farany ilay fiteny. Midika izany fa teo anelanelan'ny dimampolo taona fotsiny, niala avy tany amin'ny 100% ka lasa 3,068% no isan'ireo miteny ilay fiteny teratany (Fanisàna INEGI 2010 io).
Iray amin'ireo tena iresahana betsaka ao Meksika ny endrika iray hafan'ilay fiteny any amin'ny ivo ambonin'ny Nahuatl (klasika), ary misy fitaovam-pampianarana maro samihafa manolotra fomba fampianarana, gramera ary lahatsoratra natonta mialoha hojerena sy hovakiana. Misy koa rakibolana sy milina fikarohana tsy tapaka mihitatra ety anaty aterineto mba ho an'ny fianarana sy ny fizahàna. Tsara marihana fa ny ankamaroan'izy ireny dia lahatsoratra akademika sy voatokana, satria misy lahatsoratra marobe navoaka tanaty gazetin'ny anjerimanontolo momba io lohahevitra io.
Betsaka ihany koa ireo lahatsary Youtube misy lesona noforonin'ireo mpanohana sy mpiteny an'ilay fiteny, hatraminà fandaharana fampianarana anaty fahitalavitra novokarin'ny fanjakàna meksikàna ho an'ireo vondrompiarahamonina teratany. Misy maro ihany koa ireo foiben'onjampeo (fanjakana sy tsy miankina) ety anaty aterineto.
Kanefa, tsy dia misy betsaka ny karazana fitaovana noforonina manokana ho an'ny ankizy sy tanora. Io toedraharaha io no anton'ny fahalinana tamin'ny nanombohana tetikasa iray fanontàna fitaovana natao hojerena izay nafantoka tamin'ny fanomezana endrika sy tantara mitofotra amin'ny kolontsain'ireo vahoaka teratany. Tsy manana boky misy ny tantara avy eo an-toerana ireo ankizy sy tanora ao anatin'ny vondrompiarahamonina misy ahy, tsy misy fantsona Youtube mifantoka amin'ny lesona natao ho azy ireo amin'ny fiteny Nahuatl, tsy misy podcast ahafahany mihaino ireo feo sy tantaran'ny zokiolona izay mbola miteny an'ilay fiteny ao anatin'ny faritra Nahuatl, tsy ananan-dry zareo ny boky famakianteny, ny literatiora, na boky henoina amin'ny alàlan'ny feo mba hianarana ilay fiteny.
Tena goavana be ny filàna amin'ireny karazana fanontàna ireny, araka izany dia mino izahay fa tsy voafetra ireo fahafahana mitrandraka fanontàna, fanangonana, endrika, feo, ary lahatsary.
Noho io antony io, azoko atao ny mamintina hoe ny toedraharaha ankehitriny misy ny fiteny Nahuatl ao anatin'ny vondrompiarahamonina misy ahy dia endrika fanoherana, satria laviny ny hanjavona. Niteraka fahalinana teny anivon'ireo andian-taranaka tanora ny fahafahany miditra amin'ny torohay ety anaty aterineto mba hiverenan-dry zareo mitodika ny lasany, ka dia mivoatra ilay fiteny, mihitatra ary feno fahafahana, satria mitombo isanandro ny tinady amin'io fitaovana fampianarana io.
Activismo digital en lenguas indígenas para niños
Mikasa aho ny hifantoka amin'ny fikatrohana nomerika ho an'ireo fiteny teratany ho an'ny ankizy:
1. Hamaky ireo tantara sy ireo tanjon'ny tetikasanay hanonta fitaovana ho afaka jerenat
2. Hizara izay zavatra niainan'ny tetikasa “Fifanakalozana Fahalalàna — ny boky ‘Zaza Tamale’ “
3. Hiresaka momba ny lanjan'ny fanomezana aina vao ny fiteny sy ny maripamantarana miaraka amin'ireo endrika sy tantara mifototra amin'ny kolontsaina teratany.
4. Hizara ireo tantara, fijoroana vavolombelona ary zavabitan'ny tetikasa “Fifanakalozana Fahalalàna — ny boky ‘ZazaTamale’ “
5. Hizara momba ny fizotry ny asanay, ny fomba famoahana ny fanontàna, ny zavatra ilaina, ny tokony handray anjara, ny fomba fandrindràna sy fandaminana azy, ary ny sehatra azo itsinjaràna sy anelezana azy, sns.
Los motivos de mi activismo
Ny manosika ny fikatrohako dia :
Mihevitra aho fa hampahatanjaka anay ny fanatevenana laharana ireo ezaka sy fifanakalozana fahalalàna.
Katsahako ny hanohana sy hanapariaka ny asan'ireo vondrona hafa.
Tiako tazonina ho velona hatrany ireo zotram-piarahamonina nianarako avy amin'ireo razambeko.
Mino ny asa tsy ikatsahana tombontsoa aho ary manaraka ny ohatra omen'ireo mpikatroka sôsialy ao anatin'ny vondrompiarahamonina misy ahy.
Ampiroboroboiko ny fiarahamientana sy ny fifanakalozana miaraka amin'ireo fikambanana izay mikendry ny hisian'ny fiarahamonina mampiaty, anjakan'ny fitoviana, tsy misy fitanilàna.
Aeliko ny hevitra hoe miray hina sy miara-mitempo ary ao anatina fanahy iray iraisany ireo vahoaka teratany eto amin'izao tontolo izao.
Mino aho fa ireo vahoaka teratany dia manana havaly amin'ny olan'ny tontolo iainana, ny sakafo ary ny olan'ny maha-olona, izay mamely izao tontolo izao.
Ny antenainao ho an'ny fiteninareo?
Sueño con un resurgimiento, me gusta soñar que los materiales que hacemos impacten a los mas pequeños y los hagan reflexionar sobre su propia cultura, sobre las ventajas que les ofrece para que aprecien y abracen su riqueza e importancia.
Manonofy fihavaozan-kery iray aho, manantena fa ireo fitaovana izay avoakanay dia hisy fiantraikany amin'ireo tanora ka hahatonga azy ireny ho kofehy mampita mankamin'ny kolontsain-dry zareo, momba ny tombontsoa omen'izy io ho azy ireo, ka ho ankafizin'izy ireo sy horaisiny ny harena ao anatiny ary ny dikany.
Nofiko ny hanohy hamoaka boky sy fitaovana ety anaty aterineto amin'ny fiteny teratany izay ireo ankizy sy ny tanora avy ao amin'ny vondrompiarahamonina misy ahy no ho mpanoratra, mpandika, mpanaingo, mpamokatra votoaty ary mpitantara, mpandridra an-tsehatra… sns.
Nofiko ny hisiana Milpa Alta mahay fiteny roa, iray izay hitenenan'ireo matihanin'ny hoavy hoe : Fony aho mbola zaza dia namaky boky iray nilaza tantara iray momba ny vondrompiarahamoniko ary voasoratra tamin'ny fiteny Nahuatl, dia teraka teo ny fahalinako hianatra ny tenin'ireo razambeko.